CEEBEY TACAAL ! Kooxda ugu Hooseysa Horyaalka Talyaaniga oo Guushii ugu Horeysay ee Kulamada Banaankaa Ka gaartay Kooxda AC Milan – Gool FM
( Serie a ) 22 April 2018. Kooxda Benevento ee ugu hooseysa kooxaha horyaalka talyaaniga ayaa heshay guusheedii ugu horeysay ee kulamada banaanka kadib markii ay 1-0 ku garaaceen naadiga faca weyn ee AC Milan ciyaar ka dhacday garoonka San Siro.
Kooxdan waa markii ugu horeysay oo ay ciyaareyso horyaalka Serie a, waxaana laga yaabi karaa iney heerka labaad u dhacaan hadii maanta oo axad ah ee kooxda Crotone garaacdo dhigeeda Udinese.
Laakiin Benevento ayaa kaga mahad celineysa goolka ay ku adkaatay laacibkooda Pietro Iemmello taasoo ku noqotay Milan maalin ay xasuusan doonaan.
Waxeey ciyaarta ku dhameysteen 10 ciyaartoy kadib markii laacibka badalka kusoo galay ee Cheick Diabate uu qaatay jaalihiisa labaad markii uu u suxul u dhiftay daafaca Leonardo Bonucci laakiin wax walba waxaa kaga wacnaa guushooda.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay kooxda Benevento taariikh ka sameyneyso horyaalka talyaaniga, kulankii hore oo ay Milan ka hor yimaadeen ciyaarihii 15-aad ee horyaalka ayey ku heleen dhibicdii ugu horeeysay ee kulamada Seire a ka hesho – kadib markii uu gool u bar bareeyay waqtigii dhimashada goolhayahooda Alberto Brignoli.
Madbacadda oo ka cararaysa in ay u dhacdo heerka labaad oo galabta wajahaysa BSC